Batsira Vamwe Pavanenge Vachishungurudzika | Nharireyomurindi
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Cibemba Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zulu
NYAYA YEKUDZIDZA 26
“Imi mese ivai nekufunga kwakafanana, muchinzwirana ngoni, muchidanana kwazvo sehama, muchinzwirana tsitsi kwazvo, muchizvininipisa.”—1 PET. 3:8.
RWIYO 107 Muenzaniso waMwari Werudo
1. Tingatevedzera sei Baba vedu vane rudo, Jehovha?
JEHOVHA anotida kwazvo. (Joh. 3:16) Tinoda kutevedzera Baba vedu vane rudo. Saka tinoedza ‘kunzwira ngoni vanhu vese, kuvada, uye kuvanzwira tsitsi’ kunyanya vaya “vane ukama nesu mukutenda.” (1 Pet. 3:8; VaG. 6:10) Kana vatinonamata navo vakasangana nematambudziko anoshungurudza, tinoda kuvabatsira.
2 Vese vanoda kuva mumhuri yaJehovha vachasangana nezvinhu zvinoshungurudza. (Mako 10:29, 30) Zvinoita sekuti tichasangana nematambudziko akawanda sezvatinoswedera pedyo nekuguma kwenyika ino. Tingabatsirana sei? Ngationei zvatingadzidza pavanhu vanotaurwa muBhaibheri vanoti Roti, Jobho, naNaomi. Tichakurukurawo mamwe matambudziko ari kusangana nehama nehanzvadzi dzedu, toona kuti tingavabatsira sei kuti vaatsungirire.
IVA NEMWOYO MUREFU
3. Sezvinoratidzwa pana 2 Petro 2:7, 8, Roti akaita chisarudzo chipi chakaipa uye zvakaguma nei?
3 Roti akaita chisarudzo chakaipa paakaenda kunogara nevanhu vemuSodhoma vainge vakaipa chaizvo. (Verenga 2 Petro 2:7, 8.) Nharaunda yacho yainge yakabudirira, asi Roti akasangana nematambudziko akawanda paakaenda kunogara muSodhoma. (Gen. 13:8-13; 14:12) Zvinoita sekuti mudzimai wake aida chaizvo guta racho nevamwe vanhu vaigara imomo zvekuti akazosvika pakutadzira Jehovha. Mudzimai wacho akafa Mwari paakanayisa moto nesarufa munzvimbo yacho. Uye funga nezvevanasikana vaviri vaRoti. Vainge vavimbiswa kuroorwa nevarume vakazofira muSodhoma. Roti akarasikirwa neimba yake, upfumi hwake, uye chinotonyanya kurwadza, mudzimai wake. (Gen. 19:12-14, 17, 26) Jehovha akarega here kuitira Roti mwoyo murefu panguva iyi yaishungurudza? Kwete.
Jehovha akanzwira tsitsi Roti ndokutuma ngirozi kuti dzimununure nemhuri yake (Ona ndima 4)
4. Jehovha akaratidza sei Roti mwoyo murefu? (Ona mufananidzo uri pakavha.)
4 Kunyange zvazvo Roti akasarudza kugara muSodhoma, Jehovha akamunzwira tsitsi ndokutuma ngirozi kuti dzimununure iye nemhuri yake. Asi pane kuti akurumidze kubuda muSodhoma sezvaakaudzwa nengirozi, Roti ‘akaramba achingotenderera-tenderera.’ Ngirozi dzakatozomubata ruoko, dzikamubatsira nemhuri yake kuti vabude muguta racho. (Gen. 19:15, 16) Ngirozi dzakabva dzamuudza kuti atizire kumakomo. Asi pane kuti ateerere Jehovha, Roti akakumbira kuti atizire muguta raiva pedyo. (Gen. 19:17-20) Jehovha akateerera nemwoyo murefu, akabvumidza Roti kuti aende kuguta racho. Nekufamba kwenguva, Roti akatya kuramba achigara muguta racho achibva azoenda kumakomo, kunzvimbo yaainge amboudzwa naJehovha kuti aende. (Gen. 19:30) Izvi zvinonyatsoratidza kuti Jehovha ane mwoyo murefu! Tingamutevedzera sei?
5-6. Tingashandisa sei 1 VaTesaronika 5:14 patinenge tichitevedzera Mwari?
5 Mumwe watinonamata naye anogona kuita chisarudzo chakaipa sezvakaitwa naRoti zvomupinza mumatambudziko akakura. Tinoita sei kana izvozvo zvikaitika? Tinganzwa tichida kumuudza kuti ari kukohwa zvaakadyara, uye ichocho chinenge chiri chokwadi. (VaG. 6:7) Asi tinogona kuita zviri nani pane izvozvo. Tinogona kutevedzera zvakaitwa naJehovha pakubatsira Roti. Tinozviita sei?
6 Jehovha paakatuma ngirozi hadzina kungoenda kunoyambira Roti chete, asiwo kunomubatsira kuti apone pakuparadzwa kweSodhoma. Isuwo tingada kuyambira hama yedu kana tikaziva kuti yava kuzvitangira matambudziko. Asi tinogonawo kumubatsira. Kunyange kana achinonoka kushandisa zano reBhaibheri raanopiwa, tinofanira kuva nemwoyo murefu. Ita sezvakaitwa nengirozi mbiri. Pane kuneta tosiya hama yedu, tinofanira kutsvaga nzira dzekuibatsira nadzo. (1 Joh. 3:18) Tinofanira kuita setiri kumubata ruoko, tichimubatsira kuti ashandise zano rakanaka raanenge apiwa.—Verenga 1 VaTesaronika 5:14.
7. Tingatevedzera sei Jehovha pamaonero aaiita Roti?
7 Jehovha aigona kungotarisa zvakatadzwa naRoti chete. Pane kudaro, akafemera muapostora Petro kuti anyore kuti Roti aiva murume akarurama. Kuziva kuti Jehovha anotiregerera zvikanganiso zvedu kunotifadza chaizvo! (Pis. 130:3) Tingatevedzera sei Jehovha pamaonero aaiita Roti? Kana tikaisa pfungwa dzedu pane zvakanaka zvinoitwa nehama dzedu, tichawedzera kudziitira mwoyo murefu. Izvi zvingaita kuti vade kugamuchira rubatsiro rwatinovapa.
8. Tsitsi dzichatibatsira kuti tiitei?
8 Zvakaitika kuna Jobho zvakati siyanei nezvakaitika kuna Roti. Kutambura kwaJobho hakuna kukonzerwa nekuita chisarudzo chakaipa, asi akawirwa nematambudziko akakura chaizvo akadai sekuparara kwepfuma yake, kurasikirwa nerukudzo rwaaiva narwo munharaunda, uye kurwara. Zvakatonyanya kuipa ndezvekuti iye nemudzimai wake vakafirwa nevana vavo vese. Jobho akapomerwawo neshamwari dzenhema. Nei varume vainyepera kunyaradza Jobho vasina kumunzwira tsitsi? Havana kuedza kunzwisisa zvaiitika kwaari. Izvi zvakaita kuti vafunge zvisiri izvo, vachibva vaudza Jobho mashoko anorwadza. Tingaitei kuti tisaita chikanganiso chakadaro? Ziva kuti Jehovha chete ndiye anonyatsoziva zvese zviri kuitika muupenyu hwemunhu. Nyatsoteerera zvinenge zvichitaurwa nemunhu anenge achishungurudzika. Usangogumira pakunzwa mashoko ake, asi edzawo kunzwisisa kurwadziwa kwaari kuita. Ipapo chete ndipo paunozokwanisa kunyatsonzwira hama kana hanzvadzi yako tsitsi.
9. Tsitsi dzichatibatsira kuti tisaite sei, uye nei zvakadaro?
9 Tsitsi dzichaita kuti tisaparadzira mashoko asina kunaka nezvematambudziko evamwe. Munhu ane makuhwa haavaki ungano, asi anotoiparadza. (Zvir. 20:19; VaR. 14:19) Haana mutsa asi anotaura asina kufunga, uye mashoko ake anogona kurwadzisa munhu ari kutotambura nechekare. (Zvir. 12:18; VaEf. 4:31, 32) Zvinobatsira kana tikatarisa zvakanaka zviri kuitwa nemunhu, tofunga kuti tingamubatsira sei pamatambudziko aanenge ainawo.
Teerera nemwoyo murefu kana watinonamata naye akataura mashoko “ekuvhurumuka,” uye taura mashoko anonyaradza panguva yakakodzera (Ona ndima 10-11) *
10. Mashoko ari pana Jobho 6:2, 3 anotidzidzisei?
10 Verenga Jobho 6:2, 3. Jobho akambotaura mashoko “ekuvhurumuka.” Asi akazobvuma kuti mamwe mashoko aakataura akanga asina kunaka. (Job. 42:6) Munhu anenge achishungurudzika angataura mashoko ekuvhurumuka sezvakaitwa naJobho, ozozvidemba. Tinofanira kuita sei? Pane kumutsoropodza, tinofanira kumunzwira tsitsi. Yeuka kuti Jehovha haana kutisikira kuti titambure uye tishungurudzike sezvatiri kuita iye zvino. Saka zvinonzwisisika kana mushumiri waJehovha akataura asina kufunga paanenge achishungurudzika. Kunyange kana akataura zvinhu zvisina kururama nezvaJehovha kana kuti nezvedu, hatifaniri kukurumidza kugumbuka kana kumutonga nemashoko ake.—Zvir. 19:11.
11. Vakuru vangatevedzera sei Erihu pavanenge vachipa zano?
11 Dzimwe nguva, munhu anenge achishungurudzika angada kupiwa zano kana kuti kururamiswa. (VaG. 6:1) Vakuru vangazviita sei izvozvo? Zvakanaka kuti vatevedzere Erihu, uyo akateerera Jobho achimunzwira tsitsi. (Job. 33:6, 7) Erihu akazopa zano pashure pekunge anzwisisa mafungiro aJobho. Vakuru vanotevedzera Erihu vanonyatsoteerera munhu uye vanoedza kunzwisisa zviri kuitika muupenyu hwake. Saka pavanozomupa zano, mashoko avo anogona kusvika pamwoyo pake.
12. Kufa kwemurume waNaomi nevanakomana vake vaviri kwakaita kuti aite sei?
12 Naomi aiva mudzimai akavimbika aida Jehovha. Asi pakafa murume wake nevanakomana vake vaviri, akada kuchinja zita kuti anzi “Mara,” zvinoreva kuti “Kurwadziwa.” (Rute 1:3, 5, 20, 21) Muroora waNaomi, Rute, akaramba ainaye paaiva mumatambudziko. Rute haana kungogumira pakubatsira Naomi, asi akamuudzawo mashoko anonyaradza. Rute akaratidza Naomi kuti aimuda uye akamusimbisa nemashoko mashoma aibva pamwoyo.—Rute 1:16, 17.
13. Nei tichifanira kubatsira vaya vakafirwa nevavakaroorana navo?
13 Kana mumwe munhu watinonamata naye akafirwa newaakaroorana naye, tinofanira kumubatsira. Vanhu vari muwanano vanogona kufananidzwa nemiti miviri yakakura iri pedyo nepedyo. Nekufamba kwemakore, midzi yemiti yacho inopindana-pindana. Kana mumwe muti ukadzurwa, mumwe wacho unokanganisika chaizvo. Ndizvowo zvinoitika kana munhu akafirwa newaakaroorana naye. Anogona kushungurudzika kwenguva yakareba. Paula, * uyo akangoerekana afirwa nemurume wake anoti: “Upenyu hwangu hwakachinja zvachose, ndakapera simba. Ndakarasikirwa neshamwari yangu yepamwoyo. Hapana chandaisataura nemurume wangu. Aifara neni uye ainditsigira pandaiomerwa. Ainditeerera pese pandaitaura zvaindinetsa. Ndakanzwa sekuti ndadamburwa nepakati.”
Tingabatsira sei vaya vanenge vafirwa nevavakaroorana navo? (Ona ndima 14-15) *
14-15. Tinganyaradza sei munhu anenge afirwa newaakaroorana naye?
14 Tinganyaradza sei munhu anenge afirwa newaakaroorana naye? Danho rekutanga rinokosha kutaura naye kunyange zvichikuomera kana kuti usina chokwadi chekuti wotaurei. Paula ambotaurwa anoti: “Ndinonzwisisa kuti rufu runoita kuti vanhu vashaye zvekutaura. Vanonetseka kuti zvavachataura zvingagumbura mumwe munhu. Asi kutaura chimwe chinhu kuri nani pane kungoti zii.” Zvimwe munhu anenge achichema haatarisiri hake kuti titaure mashoko euchenjeri. Paula anoti: “Ndaizvitenda kana munhu akangoti, ‘Ndine urombo nekurasikirwa kwawaitwa.’”
15 William, uyo akafirwa nemudzimai wake makore akapfuura anoti: “Ndinozvitenda chaizvo vanhu pavanotaura zvaiitwa nemudzimai wangu. Zvinondiratidza kuti aidiwa uye airemekedzwa. Izvi zvinondibatsira chaizvo. Mashoko avo anondinyaradza chaizvo nekuti mudzimai wangu aikosha zvikuru kwandiri.” Imwe chirikadzi inonzi Bianca inoti: “Ndinonyaradzwa kana vamwe vakanyengetera nemi uye vakandiverengera rugwaro rumwe chete kana maviri. Zvinondibatsira pavanotaura nezvemurume wangu uye pavanonditeerera ndichitaura nezvake.”
16. (a) Tinofanira kuitirei munhu akafirwa newaakaroorana naye? (b) Maererano naJakobho 1:27, ibasa ripi ratiinaro?
16 Tinofanira kuramba tichibatsira vaya vanenge vafirwa sezvakaitwa naRute uyo akaramba aina Naomi ainge afirwa nemurume. Paula ambotaurwa anoti: “Ndakabatsirwa chaizvo murume wangu achangofa. Nekufamba kwenguva, vanhu vakaita sevadzokera kuupenyu hwavo hwemazuva ese. Asi hwangu upenyu hwakanga hwachinja zvachose. Zvinobatsira chaizvo kuziva kuti munhu anenge afirwa anoda kutsigirwa kwemwedzi yakawanda kunyange kwemakore akati kuti.” Zvisinei, vanhu vanosiyana. Vamwe vanoti kurumidzei kujairana nezvinenge zvavapo. Vamwe vanorwadziwa chaizvo pese pavanoita chimwe chinhu chavaimboita nemumwe wavo. Kurwadziwa kunoita vanhu vanenge vafirwa kunosiyana-siyana. Ngatiyeukei kuti Jehovha anotipa basa rekubatsira vaya vakafirwa nevavakaroorana navo.—Verenga Jakobho 1:27.
17. Nei tichifanira kubatsira vaya vanenge vasiyiwa nevavakaroorana navo?
17 Vamwe vanonetseka uye vanoshungurudzika chaizvo kana vakasiyiwa nevavakaroorana navo. Joyce, uyo akasiyiwa nemurume wake achibva atorana nemumwe mukadzi anoti: “Kurambwa kwakandirwadza kutopfuura kufirwa nemurume. Kudai akafa netsaona kana kuti nekurwara, ndaizoti hachisi chisarudzo chake. Asi apa murume wangu akatosarudza kundisiya. Ndakanzwa sekuti handisi chinhu.”
18. Tingaitei kuti tibatsire vaya vanenge vasisina vavakaroorana navo?
18 Kana tikaita zvinhu zvidiki zvekubatsira vaya vanenge vasisina vavakaroorana navo, tinoratidza kuti tinovada. Iyi ndiyo nguva yavanoda shamwari dzakanaka. (Zvir. 17:17) Ungaratidza sei kuti uri shamwari yavo? Unogona kuvakoka kuti muzodya pamwe chete. Uye unogona kuvakumbira kuti mumbotandara mese kana kuita ushumiri pamwe chete. Unogonawo kuvakumbira kuti apo neapo vambobatana nemi pakunamata kwemhuri. Kana ukadaro uchafadza Jehovha nekuti ari pedyo “nevaya vakaora mwoyo” uye ‘anodzivirira chirikadzi.’—Pis. 34:18; 68:5.
19. Uchifunga nezva1 Petro 3:8, watsunga kuitei?
19 Pasina nguva, Umambo hwaMwari pahunenge hwava kutonga nyika, ‘matambudziko ese achakanganwika.’ Tiri kutarisira chaizvo nguva yekuti “zvinhu zvekare hazvizoyeukwi, uyewo hazvizouyi mumwoyo.” (Isa. 65:16, 17) Kusvikira nguva iyoyo yasvika, ngatibatsiranei, toratidza nemashoko nezviito kuti tinoda vese vatinonamata navo.—Verenga 1 Petro 3:8.
Tinodzidzei pane zvakaitwa naJehovha pakubatsira Roti naJobho?
Tinodzidzei pane zvakaitika kuna Naomi?
Tingatsigira sei munhu akafirwa kana kuti akasiyiwa newaakaroorana naye?
^ ndima 5 Roti, Jobho, naNaomi vakashumira Jehovha vakatendeka, asi kunyange zvakadaro, vaifanira kutsungirira zvinhu zvinoshungurudza muupenyu hwavo. Nyaya ino inotaura zvatingadzidza pane zvakaitika kwavari. Inotaurawo kuti nei zvichikosha kuti tive nemwoyo murefu, tinzwe tsitsi uye titaure zvinonyaradza hama nehanzvadzi dzedu padzinenge dziine matambudziko.
^ ndima 13 Mazita ari munyaya ino akachinjwa.
^ ndima 57 KUTSANANGURWA KWEMIFANANIDZO: Hama iri kushungurudzika uye inotaura mashoko “ekuvhurumuka” mukuru achiiteerera nemwoyo murefu. Pave paya, hama yacho painenge yadzikama, mukuru wacho anoipa zano nerudo.
^ ndima 59 KUTSANANGURWA KWEMIFANANIDZO: Mhuri yechidiki iri kutandara nehama ichangobva kufirwa nemudzimai. Vari kutaura zvinhu zvinofadza zvaiitwa nemudzimai wacho.